Ukuhambelana kweGemini kunye neePisces: ♥ Uthando olungenakwenzeka? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ukuhambelana kweGemini kunye neePisces: ♥ Uthando olungenakwenzeka?
IiGemini kunye neePisces zinokuncedana ukuba zibe ngabantu abangcono kunye nabathandi ukuba balwela izinto ezifanayo. Fumana ukuba bahambelana kangakanani kubudlelwane.
Niya kuba nzima ukuqonda omnye komnye kwaye nigxile kwizinto ezibalulekileyo! Iindlela zenu zobomi zahluke kakhulu, kodwa kuninzi eninokukufunda omnye komnye. IGemini kunye neePisces zenza i-duo engaqondakaliyo kwaye zihendwa yindlela yombongo yomnye nomnye. Nje ukuba unxibelelwano lusekiwe phakathi kwakho, uya kuxhamla kwii-vibes ezilungileyo kwaye ufunde indlela yokukhula kunye. Fumana inqaku leGemini kunye neePisces ezihambelanayo apha kwaye nokuba banekamva kunye.
'I-Gemini kunye neePisces zinokulwa umlo wokunyuka!'
Inqaku lokuhambelana kweGemini kunye nePisces: 1/5
Phakathi kobume bengqondo yeGemini kunye nendalo yokuhlalutya ngaphezulu Pisces ubuntu , okunye akucaci ngokugqibeleleyo. Bajongana bengenanto emsebenzini, kwaye kunzima ukuxhasana njengamalungu osapho. kuba ngathi baphuma kwiiplanethi ezimbini ezahlukeneyo. I-Gemini ifumanisa iiPisces zibuthathaka kakhulu, ngelixa i-Pisces ifumana i-Gemini ilukhuni kwaye ingenantliziyo encinci. Ukungakhuli kunye nemvo yochulumanco kuya kuwenza lula umoya. Bobabini badlula komnye njengabantu abohlukeneyo . Kubudlelwane, ukunqongophala kwamanqaku afanayo kunokubathoba. Bajongana kunye nengcamango yokuba abaveli kwiplanethi enye ... Abalinganiswa abahluke kakhulu bale miqondiso banokuphazamisa ngokukhawuleza ubudlelwane babo.
Kutheni le duo ingabhala ibali elihle lothando
IiGemini kunye neePisces ngokwenene azihambelani eluthandweni kwaye akunakwenzeka ukuba bakwazi ukwenza izinto zisebenze. Ukuba aba babini bafuna ukwenza izinto ngendlela, kufuneka basebenzise iiyantlukwano zabo njengendlela yokuzihlanganisa, kodwa nangona kunjalo, umdlalo wothando oyimpumelelo awukaqinisekiswa. I-Gemini iya kuzisa iiPisces ingqiqo yokwenene kunye neePisces ziya kuqinisekisa ukuba zongeza i-touch of romance kunye nomlingo kubomi bukaGemini. IiPisces ziyayazi indlela yokukuhambisa, zikwenza ube nobubele ngakumbi, ungabinangqondo ngakumbi, njengawe, unika iiPisces ukufikelela kulwazi ngelixa uvumela ukuba boyise iintloni zabo.
Ubudlelwane bakho engasekelwanga kwiziseko eziqinileyo yaye ekuhambeni kweenyanga, iiveki okanye iintsuku, uya kuchitha ixesha elincinane kunye. Ukungahambelani okucacileyo imingcipheko yokumba umsele, enyanisweni, esi sibini asinakukwazi ukuma omnye komnye, umzekelo, iGemini ifumana iiPisces zincinci kwaye zibuthathaka kunye neePisces ezigweba iGemini enekratshi, engaphezulu kwaye engenantliziyo. Ngaphaya koko, le miqondiso mibini iphawulwa lulutsha oluthetha ukuba ukungakhuli okuthile kuya kuphazamisa iingxoxo zabo.
Gemini, wena kude cerebral kakhulu Pisces; ngubani kuphela ilandela ithuku kunye nengqiqo yabo! Ngokubhekiselele kwisini, iiPisces zifuna, okuya kumangalisa iGemini engavamile ukuphila ngokulindelekileyo kweqabane labo.
Zama ukwamkela. Olu lwalamano lunokuphumelela kuphela ukuba aba bantu bomthonyama bayakwazi ninyamezelane kwaye nizame ukuqondana.
07:07 Iyure yesibuko: Beka ecaleni ixesha lakho